လေနုအေး: အမှန်တရားရဲ့ အရသာ
လူတွေက အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်… အမှန်တရားကို ဖွေရှာကြတယ်… အမှန်တရားကို လိုချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း အမှန်တရားကို တွေ့ တဲ့အခါ... မြင်နိုင်ဖို့ ၊ ကြားနိုင်ဖို့ ၊ လက်ခံနိုင်ဖို့ … ခံနိုင်ရည် တကယ်ရှိပါသလား… အဆင်သင့်ရော ဖြစ်ပြီလား…။ တခါတလေ အမှန်တရားက ကိုယ်ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်အောင် လွဲချော်နေတတ်တာလေ။ ဒီလောကကြီးထဲမှာ နေရာတကာ အမှန်တရားကို သိရတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါဦးမလား…။ ဒါဆို အမှန်တရားကို ဖုန်းကွယ်တာကို အားပေးရာကျနေလား…။ အမှန်တရားကို အမြဲသိနေရဖို့ က သဘာဝကျသလား…။ နာကျင်စေမယ့် အမှန်တရားတွေကို ကြောက်တတ်သလား။
အစချီတာကြီးက နဲနဲကြီးသွားသလားလို့ …။ ဒီအကြောင်းရေးမယ်ဆို တွေးစရာတွေက မဆုံးနိုင်အောင် ပါတော့မှာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဖတ်ပေးပါနော်။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတလော ကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ TVကလာတဲ့ game showလေးကနေ အတွေးပွားသွားတာပါ။ “The Moment of Truth ” တဲ့ ။ အပွင့်လင်းဆုံးမေးခွန်းတွေကို မချွင်းးမချန် အမှန်အတိုင်းသာ ဖြေခဲ့ရင် အမြင့်ဆုံးဆု ဒေါ်လာသန်းတ၀က်ထိ ရနိုင်တဲ့gameပေါ့။ ကိုယ်ဖြေတဲ့အဖြေက လိမ်ဖြေခဲ့ရင်တော့…။
Gameထဲမှာ မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေက တကယ့် အတွင်းရေးကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်။ “မင်း သူနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာ မှားတယ်လို့နောင်တရခဲ့ဘူးသလား” တဲ့။ “ရခဲ့ဘူးပါတယ်… ဟုတ်ကဲ့” ဆိုတဲ့ အဖြေက မှန်တယ်လဲ ဆိုရော မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲပြီး
ယူကျူံးမရဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး နေရာ ပူးဝင်ခံစားမိတယ်။ ခါးသီးလွန်းတဲ့ အမှန်တရား။ ရင်ကို နာကျင်စေတဲ့ အမှန်တရား။ ဒီလို သိလိုက်ရတဲ့အခါ ယုံကြည်မှုတွေက ပါးလျသွားတော့မှာ။ ဒါပေမယ့်… ဒါအမှန်တရားလေ။ လက်ခံနိုင်ဖို့အင်အားမွေးကို မွေးရတော့မှာပေါ့။
“မင်းအမျိုးသမီးလက်ထဲကနေ တခြားမိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်ဘူးသလား” ။ သေလိုက်ပါတော့…။ အဲဒီအဖြေတခုက နှလုံးသားကို အသေသတ်မဲ့ အဖြေ။ မေးခွန်းမေးတဲ့ သူက ယောင်္ကျား အဖြေ မပေးခင် မိန်းမဘက်လှည့်မေးသေးတယ်။ “ ဘယ်လို ထင်သလဲ” တဲ့။ “ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့ အပြုံးနဲ့“သူဒီလို ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” တဲ့။ သွေးအေးတဲ့ ယောင်္ကျားက အမှန်တရားကို ရက်ရက်စက်စက် ပြောသွားတယ်။ “ဟုတ်ကဲ့… ငါဖောက်ပြန်ဘူးပါတယ်” တဲ့။ ခုနက မိန်းမဆီက ယုံကြည်မှုတွေ မျက်ရည်အဖြစ်ပြောင်း ချောင်းစီးသွားတယ်။ ပွဲကြည့် ပရိသတ် ကိုယ်ကတော့ ဒီတခါမှာ
ဒီgameကို ကျေးဇူးတင်သွားတယ်။ နို့ မို့ဘယ်အချိန်ထိများ ဖောက်ပြန်သူ တယောက်ရဲ့ လှည့်စားမှုကို ခံနေဦးမလဲ။ ဒီအမှန်တရားက သိသင့်တဲ့ အမှန်တရား။ လူပုံလည်မှာ ကျုပ်ဒီလောက် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားပါတယ် ဆိုတာ ဖွင့်ချလိုက်ရသူအတွက် အရှုံး။
“မင်းဟာ မင်းမိဘတွေ အတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတခုလို့ခံစားရလား”။ အမေကြီးက သားအဖြေကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေတယ်။ ကိုယ့်ရင်သွေးနာကျင်တာ မကြည့်ရက်တဲ့ အမေတယောက် အတွက် လှပတဲ့ အဖြေပဲဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမှ မဆုံးသေး “ခံစားရခဲ့တယ်…” တဲ့။ ခေါင်းလေး တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းသွားတဲ့ မိခင်တယောက်ရဲ့ ခံစားမှုကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေက ရိုက်ရင် နောက်တနေ့အဖေနဲ့ အမေ အပြင်က ပြန်မလာခင် ကျွန်မသည် ဦးxxx နှင့် ဒေါ်xxxတို့ ရဲ့ သမီးအရင်း မဟုတ်ပါလို့စာရွက်ပေါ်ရေး အိမ်ရှေ့ ခန်းမှာ ကပ်ထားတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကို ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မေးလာခဲ့ရင်ကော။ မိဘဖြစ်လာမှ မိဘမေတ္တာကို ပိုနားလည်လာတတ်ကလဲ အမှန်တရားတခုပဲ မဟုတ်ပါလား။
တခါတလေကျတော့လဲ အမှန်တရားက ချိုမြနေပြန်ရော။ “မင်းရဲ့ ရီးစားဟောင်းက မင်းရင်ထဲမှာလွှမ်းမိုးတုန်း… အခြေအနေပေးရင် ပြန်ဆက်ချင်တုန်း” ဆိုတာကို “ဟုတ်ကဲ့” လို့ ဆိုတော့ ကောင်မလေး မျက်လုံးလေးတွေ ပြုံးသွားတယ်။ အဲဒီအပြုံးထဲမှာပဲ အချစ်က ပျော်ဝင်စီးမျောလို့ ။ ဒါမျိုးလေးတွေ လုပ်စမ်းပါလို့ပြောလို့ မှ မဆုံးသေး ရက်စက်တဲ့ မေးခွန်းက ဆက်လာတယ်။ “မင်းရီးစားဟောင်းကို အရင်ချစ်သူဘ၀က လှည့်စားလိမ်ညာခဲ့ဘူး သလား” တဲ့။ “ဟုတ်ကဲ့” ။ ခုနက ပျော်နေခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး ပါးစပ်လေးဟ အံ့သြသွားခဲ့တယ်။
ဒီလူကလဲ မှန် မှန်နိုင်လွန်း။ အဖြေတွေ တခုပြီး တခု မလိမ်ညာပဲ အမှန်ဖြေလေလေ သူ့ နားက သူနဲ့ ရင်းနှီးသူတွေ နာကျင်လေလေ။ နောက်ဆုံး အမေကြီးက တော်လောက်ပါပြီ… ဘယ်သူ့ နှလုံးသားကိုမှ ဆက်ပြီး မနာကျင်စေချင်လို့ ပါတဲ့။ အမှန်တရားကို လက်မြှောက် အရှုံးပေးလိ်ုက်ရခြင်း။
ဒီshowဟာ ကိုယ်ကျင့်တရား မဖောက်ပြန်၊ စိတ်ထားမြင့်မြတ် သိမ်မွေ့ တဲ့ သူတွေ နဲ့ ဆို အတော်ကြည်နူး စရာကောင်းမှာပါ။ သူတို့ က အမှန်တရားတွေနဲ့နေထိုင်သူလေ။ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးသူ စိတ်ထားပျော့ညံ့ ယိုင်နဲ့ လွယ်သူတွေ အတွက်တော့ အတော် ရုပ်ဆိုးစေတဲ့game တခုပေါ့။ တကယ်လို့ များ အမှန်တရားနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားချင်ရင် ကိုယ်တယောက်ထဲ online ပေါ်မှာ အရင်ကစား ကြည့်ပေ့ါ။ ပြီးရင်… ပြောပြဦးနော်… အမှန်တရားရဲ့ အရသာ။
(မေးခွန်းများကို မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နီးစပ်အောင် အကြမ်းဖျင်း ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်)
Posted by တန်ခူး at 11:32 PM
အမှန်တရားဆိုတာ လိုအပ်တာ မှန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တခြားမေးခွန်းတွေ မပြောချင်ပေမဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သားတယောက်ရဲ့ အဖြေကို အမေကြီးတယောက် မျက်ရည်ဝဲပြီး မခံစားစေချင်ဘူး။ လူဆိုတာ perfect မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိကျန်တဲ့ ဘ၀တိုတိုလေးမှာတော့ အမေရဲ့ ခံစားချက် နဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ သူရမဲ့ ဆုငွေထက် အများကြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
နောက်တခုက အဲဒီလိုပြောတာဟာ လိမ်တာ၊ မှန်တာဆိုတာကိုရော ဘာနဲ့များ check ပါလိမ့်။ တွေးမိတာလေးတွေပါ။
ချိုသင်းကတော့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ အမြဲတမ်း မှန်မှန်ကန်ကန် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း နေခဲ့၊ နေဆဲ။ အဲဒါဟာလဲ ကိုယ်ချစ်ခင်သူကိုလဲ မထိခိုက်စေခဲ့ဘူးလို့ ခုထိ ယုံကြည်နေဆဲပဲ။
တခါတခါတော့ အမှန်တရားဆိုတာ သိပ်ခါးသီးတာပဲနော်.. အမှန်တရားကို ဖွင့်ဟ၀န်ခံတာ ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံတာမျိုး၊ ကိုယ်မှားခဲ့တဲ့ အတွေးတွေ လုပ်ရပ်တွေကို နောင်တ ရလို့ တောင်းပန်တာမျိုးဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိမယ် ထင်ပါရဲ့။ လူတိုင်းက ရင့်ကျက်တဲ့သူ မဟုတ်လေတော့ အမှန်တရားရဲ. ခါးသီးမှုကို လူတိုင်းခံနိုင်ရည် ရှိပါ့မလား... တွေးမိတာလေးတွေပါ..။
၀တ္ထုထဲက ကိုသက်ခိုကို အဘကအရက်ဖြတ်စေချင်လို့
ကောင်းသော လိမ်ညာခြင်းဆိုတာကလည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်တယ်... တကယ်လို့ ကိုယ်သာ အဲလို နေရာမှာ အမေးခံရရင်ကော... ???
ကိုယ်လဲ ဘယ်တော့မှ သွားမဖြေဘူး။
အမှန်တရား... ဆိုတာ .. အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေသူတွေအတွက်တော့ မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တခါတလေမှာ ကောင်းသော ညာခြင်းအတွက်တော့ အမှန်တရားကို သွေဖယ်သွားရတဲ့အခါတွေ ရှိကောင်းရှိပေမဲ့
အကွက်ကျကျ လိမ်ညာထားတဲ့ အမှန်တရားဆို၇င်တော့ အဲဒီအမှန်တရားက တဖက်သားကို ပိုနစ်နာစေတတ်ပါတယ်..။
လူဆိုတာ တခါတလေတော့လည်း အမှန်တရားနဲ့ မုသားစကားကြားမှာ တော့နေထိုင်နေရတာ မဟုတ်ဘူးလား။
တခါတုန်းက .. အိမ်မှာ အက်ဆီဒင့်ဖြစ်တဲ့ မြတ်နိုးကို ဆေးရုံကိုလိုက်တာတဲ့ အမက ဖက်ပီး အားရပါးရ ငိုနေတာ.. ကိုယ်ပါလိုက်ငို ပီး ကိုယ့်အမက ကိုယ့်ထက် မတိတ်တမ်းငိုနေတော့ ..ကိုယ်က ပါဆက်ငိုနေရင် ကိုယ့်အမက ဒုက္ခပိုရောက်တော့မှာလေ...။ ဒါနဲ့ အငိုတတ်ပီး သမီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ သူက တမျက်နှာလုံးမှာ သွေးတွေ အလိမ်းလိမ်းနဲ့ လေ..အဲဒီအချိန်ဆရာဝန်က ဓာတ်မှန်မရိုက်ရသေးတော့ အပေါ်ယံကြည့်ပီး ပြောတာက မေးရိုးကျိုးသွားပီတဲ့..။ ဒါဆို အဲဒီအချိန်က မြတ်နိုးအငိုတိတ်ပီး ညာလိုက်တာ အမှန်တရား မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ မြတ်နိုးအမ .. ပြန်တည်ငြိမ်သွားတာတော့ အမှန်ပဲ.။ ဟုတ်ဖူးလား။
အမ..ဟုတ်တယ်နော်.. မြတ်နိုးလည်း ငယ်ငယ်က အဲလိုပဲ အိမ်က လူကြီးတွေ ဆူပီဆိုရင် ..ငါက သမီးအရင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပီး ..အမြဲ တွေးတာ။ တခါတလေတောင် သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြသေးတယ်။ ငါက.. မွေးစားသမီးထင်တယ်လို့..။ အဟီး..
အမှန်တရားကို ကျနော်လည်းချစ်တယ် အစ်မရေ့ ဒါပေမယ့် မုသားမပါလကာင်္မချောဆိုတဲ့စကားလို ကိုယ့်ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနာကျင်ရမယ် ခံစားရမယ့် အဖြစ်...။သူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်တဲ့ လိမ်ညာမှုမျိုးဆိုရင်တော့ ကျနော်က မရိုးသွားစွာနဲ့ လိမ်ညာမိမှာပဲ ဆုကြေးမရရင်လည်းနေပါစေ ပိုက်ဆံနဲ့အမေ့မျက်ရည်ကိုတော့ မလဲနိုင်တာ အမှန်ပဲ ။
အမှန် တရား ကို မသိလိုပါ။ ညာနေ တာ လေး ကို သာ ခံယူ ချင်ပါတယ်။ ကိုယ် က မပြတ် သား နိုင်လို့ပါ။
အမှန်တရား (သစ္စာ) နဲ့ အမှန်ကို ပြောဆိုခြင်း နှစ်ခုကို နည်းနည်းရောထွေးနေတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
အမှန်တရားကို သိမြင်တာ၊ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတာ၊ ဒီထက့်တဆင့်ပိုပြီးတော့ အမှန်တရားကို လက်ခံနိုင်တာဟာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာပေးရရင်…. လူဟာ အိုခြင်းသဘောရှိတယ်၊ နာခြင်းသဘောရှိတယ်၊ သေခြင်းသဘောရှိတယ်၊ ချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံးနဲ့ သေကွဲသော်လည်းကောင်း၊ ရှင်ကွဲသော်လည်းကောင်း မလွှဲမသွေ ခွဲခွာရတဲ့ သဘောရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသဘောတရားတွေကို နေ့ညမပြတ်ဆင်ခြင်အပ်တယ်လို့ ဗုဒ္ဓက ပြောခဲ့တယ်။ ဒီသဘောတွေကို တန်ခူးတွေးကြည့်ပါ။ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ သေကွဲ၊ ရှင်ကွဲ ကွဲခြင်း စသဖြင့် ဘယ်တခုက နှစ်မြို့စရာကောင်းလို့လဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေဟာ အမှန်တရားတွေချည်းဘဲ။ ဒီအမှန်တရားကို သိနားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်၊ ဒီ့ထက်ပိုပြီး လက်ခံနှလုံးသွင်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုရင့်ကျက်သူတယောက်ဖြစ်လာတတ်ဟာ စဉ်းစားကြည့်ရင်ကို အတိုင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်တရားဟာ ခါးသီးလို့ မကြားရဲ၊ မနာရဲ၊ မပြောရဲ၊ လက်မခံရဲဘဲ ရှောင်ပြေးတာဟာ မရင့်ကျက်ရာ၊ သူရဲဘောကြောင်ရာကျပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ စဉ်းစားဉာဏ်မရင့်သန်မီ၊ မရင့်ကျက်မီမှာ “လူကလေးလာလာ၊ ဒီဆေးဟာ ချိုတယ်၊ သောက်လိုက်ပါကွာ” လို့ ချော့မော့တိုက်ကြရပေမယ့် ရင့်ကျက်လာတဲ့လူကြီးတယောက်အဖို့တော့ ဆေးခါးကိုလည်း ရောဂါပျောက်ဘို့အတွက် သောက်တန်သင့်ရင် ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် သောက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လောကကြီးမှာ ရှိသမျှ ဆေးဝါးတိုင်းဟာ သကြားအုပ်မထားတဲ့အတွက်ပါ။
အမှန်တရားမှာလည်း အလားတူဘဲ။ အမှန်တရားတိုင်းဟာ မချိုမြိန်နိုင်ဘူး။ ရင့်ကျက်သူတယောက်အတွက်တော့ မချိုမြိန်တဲ့ အမှန်တရားကိုလည်း လက်ခံနိုင်ပေလိမ့်မယ်။
အမှန်တရားကို ပြောကြားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ “ဟုတ်မှန်တယ်၊ အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ကြားရသူ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ အခါအားလျော်စွာ ပြောဆိုအပ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကိုဘဲ ကျနော်သဘောကျတယ်။
နောက်တခုက လူတွေက “ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ လိမ်ပြောတာဆိုရင် ကောင်းတယ်။ အဖြူရောင်မုသားကို လက်ခံတယ်” စသဖြင့် ပြောကြတာရှိတယ်။ အမှန်တော့ မုသားဆိုရင် ဘယ်မုသားမှ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကြွေးကြော်ထားသူတွေအဖို့ ပိုလို့တောင် မလိမ်သင့်သေးတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၀ါဒကို သဘောကျတယ်။ သူမက မလိမ်မညာဘဲ မဖြေလို့ဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းတွေဆိုရင် လုံးဝ မဖြေဘဲသာ နေလိုက်တယ်။ လိမ်ညာဖြေဆိုခြင်း မလုပ်ဘူးတဲ့။ အန်တီစုကို လေးစားတဲ့အချက်တွေမှာ အဲသည်အချက်လည်း ထိပ်ဆုံးကပါတယ်။
တဖက်သားကို အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်ရင် သူစိတ်ထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာ တကယ်တော့ တဖက်သားကို အထင်အမြင်သေးထားတာဘဲ။ စော်ကားတာဘဲ။ တဖက်သားကို ကိုယ်လိုဘဲ ရင့်ကျက်သူလို့ ယူဆထားရင်တော့ ဒီလိုတွေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ။
ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် ပို့စ်သတ်သတ် တပုဒ်ရေးပါဦးမယ်။
အမှားပြင်ဆင်ချက်။ ။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာ) သူမက လိမ်ညာပြီးဖြေရမယ့်မေးခွန်းတွေဆိုရင် လုံးဝ မဖြေဘဲသာ နေလိုက်တယ်။ လိမ်ညာပြီးဖြေတာမျိုးတော့ မလုပ်ဘူး….. လို့ ဖတ်ပေးပါရန်။
အတွေးအခေါ်အယူအဆနဲ့တင်ပြချက်လေးတွေ သဘောကျနေတာ ကြာပြီ သိလား
ဟင်း.. အမရယ်.. သူတို့ဖြေနေတာ ပိုက်ဆံရဖို့ အဓိကပေါ့နော်.. သူတို့မှန်တယ် မမှန်ဘူးက မမိုးချိုသင်းပြောသလိုပဲ ဘယ်လို check လဲဟင်.. သူတို့တွေ အဲဒီငွေကို ရသွားကြလားဟင်။ အမှန်တရားဆိုတာ အခုလို ပါးစပ်နဲ့ထုတ်ပြောမှ မှန်သတဲ့လား.. မတွေးတတ်တော့ဘူး အမရယ်.. အဲဒီလို show မျိုးလည်း မကြည့်ဖူးပါဘူး။
ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ “ဟုတ်မှန်တယ်၊ အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် ကြားရသူ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ အခါအားလျော်စွာ ပြောဆိုအပ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားကိုဘဲ ကျနော်သဘောကျတယ်။
နောက်တခုက လူတွေက “ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ လိမ်ပြောတာဆိုရင် ကောင်းတယ်။ အဖြူရောင်မုသားကို လက်ခံတယ်” စသဖြင့် ပြောကြတာရှိတယ်။ အမှန်တော့ မုသားဆိုရင် ဘယ်မုသားမှ မကောင်းဘူးလို့ ထင်တယ်။
"မဟုတ်ပါ။ သူတပါးကို အကျိုးရှိစေမဲ့ မုသားဆိုတာ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ.. သေခါနီးလူမမာတယောက်ကို ခင်ဗျား ခုသေတော့မှာလို့ ပြောရင် ချက်ချင်းသေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျား မသေနိုင်သေပါဘူး။ စိတ်ချမ်းသာတာလေးတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်သွားလို့ပြောကြည့်လေ.. အဲဒီလူ သေကာမှ သေရော သူ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ အနဲဆုံး တော့ မသေခင်အချိန်ထိ နေနီုင်မှာပေါ့။"
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကြွေးကြော်ထားသူတွေအဖို့ ပိုလို့တောင် မလိမ်သင့်သေးတယ်။တဖက်သားကို အမှန်အတိုင်းပြောလိုက်ရင် သူစိတ်ထိခိုက်သွားမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာ တကယ်တော့ တဖက်သားကို အထင်အမြင်သေးထားတာဘဲ။ စော်ကားတာဘဲ။ တဖက်သားကို ကိုယ်လိုဘဲ ရင့်ကျက်သူလို့ ယူဆထားရင်တော့ ဒီလိုတွေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူးလေ။
အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကလည်း ဝေခွဲရခက်လိုက်တာ။ အတွေးတွေတသီကြီးနဲ့ ဖြစ်သွားတယ် အမတန်ခူးရယ်။
အမည်မသိပေးတဲ့ ဥပမာနဲ့ အပေါ်မှာ ထောက်ခံပါတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ အဆို၂ခုက ကွန်မင့်တခုထဲမှာတင် ၀ိရောဓိ ဖြစ်နေပါတယ်။ အပေါ်မှာတော့ ဟုတ်မှန်သော်လည်း အကျိုးမရှိရင် မပြောသင့်ဘူးဆိုတာကို ထောက်ခံတယ်လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ အောက်မှာ ဥပမာပေးတဲ့အခါမှာကျတော့…
ပထမ စဉ်းစားရမှာက သေတော့မယ့် လူမမာကို ခင်ဗျား ခုသေတော့မှာလို့ ပြောတာဟာ အကျိုးရှိမရှိ စဉ်းစားရမယ်။ ဘယ်သူကမှ ရိုက်မပြောခိုင်းဘဲနဲ့ လူမမာစိတ်မချမ်းသာပါစေတော့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သွားပြောရင် ဘယ်အကျိုးရှိနိုင်ပါ့မလဲ။ မပြောလည်း ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘဲမဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားမသေနိုင်သေးပါဘူးလို့ မဖြစ်နိုင်တာကို လိမ်ညာပြီး False Hope သွားပေးတာကမှ အပြစ်ကြီးတယ်။ လိမ်တဲ့လူမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ မလိမ်ဘဲ အဖြစ်မှန်ကို ပြောလိုက်တာကမှ ဟိုလူက ရင့်ကျက်တဲ့လူဖြစ်လို့ ၊ ဒါမှမဟုတ် တရားရသူဖြစ်လို့ သူမသေခင် စီစဉ်စရာရှိတာလေး၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာလေး လုပ်သွားချိန်ရဦးမယ်။ သွားပြီး False hope ပေးမိလို့ အချိန်တွေရှိသေးတယ်ထင်ပြီး လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်သွားရဘူးဆိုရင် အဲသည်လိမ်တဲ့လူမှာ အရမ်းအပြစ်ရှိတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းသော်လည်း လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှားတဲ့အတွက် အကျိုးမဲ့သွားတာတွေ လောကကြီးမှာ တပုံကြီးရှိတယ်။ ဥပမာ ဖခင် နဖူးမှာ ကိုက်နေတဲ့ခြင်ကို တူနဲ့ထုပြီး သတ်ပေးတဲ့ သားရဲ့ လုပ်ရပ်လိုပေါ့။ စေတနာမှန်တယ်။ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်မှားတယ်။
နောက်တခုက ငါးပါးသီလမှာ မကြောင်မကျားတဲ့ သီလဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုတယ်။ လိမ်တာကတော့ ဘယ်လိုလိမ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမှန်ကို သိသိနဲ့ မပြောသရွေ့ကတော့ မုသာဝါဒါဘဲ။ အဲသည်လိုသာ တချို့အလိမ်တွေကို လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုရင် မုသာဝါဒါ ဝေရာမဏိကို ဗုဒ္ဓက ငါးပါးသီလမှာ ဘယ်ထည့်လိမ့်မတုန်း။ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။
ဥပမာ..ကိုပေါနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဆွေမျိုးအရင်းကြီး သေခါနီးနေပီဆိုပါစို့..။ (ဥပမာပေးတာ)
ကိုပေါ ..ချက်ချင်းပြောမလား ..XXXX သေတော့မှာဆိုပီး ။ ပြောမလား။
တခါတလေ အမှန်တရားဆိုပေမဲ့ တဖက်သား မနစ်နာစေချင်ရင် မုသားသုံးသင့်က သုံးရမှာပဲ။ မသုံးပါဘူးဆိုရင်တော့ တေမိလိုနေတာပဲ အကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ . မဟုတ်ဘူးလား။
ကိုပေါ.. လောကမှာ အမှန်တရားဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့တခါတခါမှာ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အတွက် မုသားသုံးသင့်သုံးရမှာပါပဲ။
ငါ့စကားနွားရ စွတ်မငြင်းပါနဲ့။ လောကမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အနည်းနဲ့အများ မုသားမသုံးတဲ့ သူရယ်လို့ မတွေ့ ဘူးသေးပါဘူး။
အဲဒါကို ငါ... ဘယ်တုန်းကမှ မပြောပါဘူးလို့ ငြင်းရင်လဲ..။ ပြုံးလျက်သာ ပြန်သွားတယ်လို့ ..
တော်ပါပီ ဘလော့ရှင်ကို အားနားလို့ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။
ကိုပေါက အရမ်းစွာတယ်။ ကိုယ်လိုရာကို ရအောင်ဆွဲပြောတတ်လို့ ကျနော်က စကားသိပ်မတတ်တော့ လက်ရှောင်ပါတယ်..။
အပေါ်က ကျနော့်ကွန်မင့်တွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးမှ ရေးပါဗျာ။ အမည်ဝှက်နဲ့ရေးတယ်ဆိုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးသားလို့ အကျိုးမရှိပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို ဆွဲချသလိုဘဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်သန့်ရင်၊ ကိုယ့်စကားကိုယ် တာဝန်ယူရဲတယ် ဆိုရင် ကလောင်နာမည် (သို့မဟုတ်) နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးပေါ့ဗျာ။
အယူအဆတရပ်ကို ဆွေးနွေးကြတာဘဲ စွာတယ်မစွာဘူး ရှိသလားဗျာ။ မိတ်ဆွေနဲ့ အယူအဆမတူတဲ့ အမြင်ဘက်ကနေ ဆွေးနွေးမိတာနဲ့ဘဲ စွာတယ်လို့ စွတ်စွဲတာ ကလေးမဆန်ဘူးလားခင်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာသာရေးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အကြောင်းအရာမှာမဆို ရင့်ကျက်ကြတယ်ဆိုရင် ဒီလိုဘဲ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတာဘဲ။ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်မဟုတ်ဘဲ စွာတယ်ဆိုပြီး အတင်းကောက်ချက်ဆွဲတာမျိုးကမှ မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စဘဲ မဟုတ်လား။
အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြောပြီး ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်ဗျာ။ ဆွေမျိုးအရင်းကို သေကာနီး အကျိုးမရှိပြောချင်တဲ့ ကိစ္စကလည်း မိတ်ဆွေဘဲ စတင် လာတာပါဗျာ။ ကျနော်စခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော်ပြောတာက “လိမ်ပြောတဲ့ ကိစ္စဟာ မကောင်းဘူး”လို့ဘဲ ပြောတာပါ။ “ကျနော် ဘယ်တုန်းကမှ မုသား မပြောဖူးပါဘူး”လို့ ကွန်မင့်ထဲမှာလည်း တခါမှ မပြောခဲ့ပါလားဗျာ။ ဒီတော့…ဘယ့်နှယ် ကျနော်မပြောခဲ့တာကိုတွေကို မတော်မတရား အတင်းအဓမ္မ စွတ်စွဲနေရတာလဲ။
အမုန်းတရားတွေ လျှော့ပါဗျာ။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အမည်ဝှက်နဲ့ရေးပေမယ့်လည်း စိတ်ထဲမှာ ပူလောင်နေမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိလို့ပါ။
မတန်ခူးရေ... တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ရှိုးတစ်ခုပါ။ ဟုတ်ပါတယ် တခါတခါ အမှန်တရားတချို့က ကြောက်စရာကောင်းလွန်းတော့ ကိုယ်ပါ အမှန်တရားကိုပါ မသိချင်တော့ဘူးလို့ တွေးမိတဲ့ အခါတွေ ရှိပါတယ်။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
အခုတစ်လောကြားရတာတွေက မကြားဖူးတာတွေ များနေတယ်။ တော်တော်လည်း ထွင်တတ်ကြပါရဲ့။
ဂိမ်းလေး အကြောင်းဖတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ။
I also usually watch this game show.
It'sakiller show!
It kills your name, reputation, relationship and everything!
I could never understand why these people want to exchange their whole life with just some certain amount of money!
By the way, this is the first time I visit your blog.
I must say whatagreat blog. :)
အမှန်တရားဟူသည် တုတ်ထမ်း ဒါးထမ်းပြီး ငြင်းခုံရသော အရာဖြစ်သလော။
အမှန်တရားသည် ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ရှိသလော။
အမှန်တရားက ပီတာဇော်မြင့်ပြုံးကလေး ပြုံးကာ ခတ်မဆိတ်နေ၏။
ဒေါ်ကြီးပန်ကဲ့သို့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်ကို ယုံကြည်သူ ဘလော့ဂါတဦးအနေဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် မတူညီသည့်အမြင်များအကြား လွတ်လပ်စွာရေးသားဆွေးနွေးနေကြသည့်ကိစ္စကို တုတ်ထမ်း၊ ဒါးထမ်းငြင်းခုံသည်ဟု တံဆိပ်ကပ်လိုခြင်းဖြစ်ပါက နည်းနည်းတော့ အံ့သြစရာရှိသည်။ (မဟုတ်ပါက ဆောရီးပါဗျိုး။း-)
အမှန်တရားသည် တုတ်ထမ်း၊ ဒါးထမ်းပြီး ငြင်းခုံရသော အရာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းတွင် ထိုသို့သောငြင်းခုံမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အလို့ငှာ မှိုလိုပေါက်နေသော တရားရုံးတော်များနှင့် ထိုတရားရုံးကို မှီကာ ကြီးပွားနေသော ရှေ့နေများကား လက်ညှိုးထိုးမလွဲအောင် ရှိတော့သည်မဟုတ်ပါလား…ဒေါ်ပန်ဒိုရာ။ (I want the truth, nothing but the truth, lahး-)
အမှန်တရားသည် အရေးကြီးသောအရာမဟုတ်ခဲ့လျှင် ထိုတရားရုံးများ၊ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ၊ စာရင်းစစ်များ စသည့် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရတော့မည်လော….
အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ခွဲခြားနိုင်ရန် ပညာသင်ကြားပေးနေရာ စာသင်ကျောင်းအားလုံးကို ပိတ်ပစ်ရတော့မည်လော…. (ပြောသာပြောရ၊ နအဖ ကတော့ ပိတ်လေ့ရှိတယ်၊ ကိုယ့်အလှည့်တုန်းက သုံးနှစ်ပိတ်တာ ခံလိုက်ရတယ်)
အလားတူပင် လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတသိန်းပတ်လုံး ပါရမီဖြည့်ကာ (သစ္စာလေးပါး) အမှန်တရားကို ရှာဖွေခဲ့သူညွှန်ပြခဲ့သူ ဗုဒ္ဓအား အရေးမကြီးတဲ့အရာအတွက် အချိန်ကုန်ခံသူ၊ မယောင်ရာဆီလူးသူဟု သမုတ်ရတော့မည်လော….
တကယ်တော့ အမှန်တရားသည် အရေးပါသည်။ အမှန်တရားကို နံပြားလို့ ထင်နေသူများကသာ အမှန်တရားကို ပန်းကန်ပြားအောက်တွင် ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မုသားကို ဗန်းပေါ်တင်ဘို့ ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ မုသားကို ရောင်းထုတ်ဘို့ ကြိုးစားနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
အမှတ်တရအဖြစ်… အိုးဝေ(စင်္ကာပူ) အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ ကိုဝေလင်းရေးသားခဲ့ဘူးသော မုသား၊ အမှန်တရားတို့နှင့် ပတ်သက်သော စာစုလေးကို နှစ်သက်သဖြင့် (ကွက်တိမဆိုင်လှသော်လည်း) ကောက်နှုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
“မုသားက ကမ္ဘာပတ်ပြီးချိန်အထိ အမှန်တရားက ဖိနပ်စီးနေတုန်းဆိုသည့် စကားတခွန်းကို မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီဆိုသည့်သူများက ဘုရားဟောလိုလို ပြောကြဆိုကြသံကိုလည်း ကြားဘူးသည်။ တကယ်က မုသားက သူ့ဖိနပ်ကို ခိုးစီးသွား၍ အမှန်တရားခမြာ ဖိနပ်ပျောက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ မုသားသည် သူ့ဖိနပ်နှင့်သူ အိမ်တ၀င်းတောင် ပတ်နိုင်တဲ့သူ မဟုတ်ကြောင်း သိကြဖို့ကောင်းသည်။ -------------------------------------------------------အလှုပ်အယမ်းများသည့်ဘ၀ထဲ အသက်တွေ ကြီးရင့်လာကြလို့လားမသိ။ အမှန်တရားအပေါ် ယုံမှားချင်မိသလို ဖြစ်ကြရသည်ကိုတော့ မဖုံးကွယ်ချင်။ ဒါပေမယ့် သေချာသည်မှာ အမှန်တရားကတော့ မမှားပါ။ မှားချင်းမှားလျှင် မိမိတို့ မှားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်မည်။”
(ကိုဝေလင်း ရေးသားခဲ့ဘူးသော “တောအုပ်ထဲက လူသွားလမ်းကလေး” စာစုမှ ကောက်နှုတ်သည်။)
ကဲ...ကျနော်တို့တတွေကရော.... အမှန်တရားရဲ့ ဖိနပ်ကို ခိုးစီးသွားတဲ့ မုသားဆိုတဲ့ သူခိုးကို ဖော်ထုတ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် သူခိုးဓားရိုးကမ်း လုပ်ကြမလား။
တိန်... ခင်ဗျားကို မဆိုလိုပါ ကိုပေါ။
အမှန်တရားဆိုတဲ့ အရာက သူ့ ဘာသာ နေ နေပါတယ်...
ဒါပေမယ့် လူတွေက မုသားတွေထဲမှာ နေထိုင်ခြင်း၊
မုသားတွေထဲမှာ နစ်မျောခြင်းများလာတဲ့ အခါ..
အမှန်တရားဆိုတာကို နေရာတိုင်း နားဝင်မချိုနိုင်တော့ပါဘူး....။
လူသတ္တ၀ါတွေကလဲ စေတသိတ်ရဲ့ 
ခြယ်လှယ်မှုတွေကြောင့် တစ်ချို့ မုသားတွေကို ခါးသီးလာကြတော့တာပေါ့..။
အားလုံးကလဲ အာသဝေါကုန်ခမ်းတာမဟုတ်လို့ 
ပြောဆိုကြတဲ့ နေရာမှာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဘို့ တော့
တစ်ဖက်သား အကျိုးပျက်စေသော စကားကို မဆိုအပ်ဘူးလို့ ဆုံးမထားပါတယ်..။
အခုက ဆုငွေ လိုချင်လို့အမှန်အတိုင်းပြောတာ...
ရရှိလာမယ့်ငွေကြေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ ပါတ်သက်သူအားလုံး
ရဲ့နှလုံးသားကို နင်းပစ်လိုက်ရမှာကိုတော့...
ရလိုက်တာနဲ့ပေးလိုက်ရတာတွေ မတန်ပါဘူး...။
ငေါက လူတိုင်း သည်းခြေကြိုက်ပါ...ဒါပေမယ့်
သူ့ စကားကို ကြားလိုက်ရျတဲ့ သူတွေရဲ့ ခံစားမှုက သေရာပါသွားနိုင်ပါတယ်...။
ဒါပေမယ့် အဲဒီဂိမ်းကိုတော့ မဖြေချင်ပါဘူး...
ကျနော်တို့ က လူတွေလေ..။
ဒီပို့စ်မှာ လာရေးမယ့် ကွန်မင့်တွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ ကျနော်လိုက်ဖတ်နေတာ။
Thorn Musem ရဲ့ အမြင်ကို သဘောကျပါတယ်။
မှန်ပါတယ်။ ဒီ ဂိန်းမ်ကို ၀င်ကစားတော့မယ်ဆိုကတည်းက ဒီလိုမေးခွန်းတွေ ကြုံရတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွက်ဆထားရတော့မှာပေါ့။ ချစ်သူခင်သူတွေကို မိမိအမှန်အတိုင်းပြောလိုက်လို့ စိတ်ထိခိုက်မှာ၊ နစ်နာမှာ စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင်တော့ အစကတည်းက ဒီဂိန်းမ်ကို ၀င်မပြိုင်ကြရုံဘဲ ရှိတော့တာပေါ့။
သို့သော် လူဆိုတာကလည်း အခက်သား။ ငွေကိုလည်း မက်ကြသေးတာကိုး။ ဒီတော့ ၀င်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံးလုပ်ရတဲ့ သဘောလည်း ရှိသေးတာဆိုတော့ ကိုယ်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား စဉ်းစားရပေမပေါ့။ ကိုယ်လိုချင်တာက ငွေ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ ကွယ်ဝှက်မနေနဲ့တော့။ အမှန်အတိုင်းသာ ပြောပေတော့။ အပေါ်က ကွန်မင့်တွေမှာ လိမ်တယ်၊ မှန်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ လိမ်ညာတဲ့လူတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ မျက်တောင်ခတ်သည့် အကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ သူငယ်အိမ်အကျုံ့အကျယ် စတဲ့ (ကျနော်ဥပမာအဖြစ်ပြောတာပါ။ တခြားပြောင်းလဲချက်တွေကို စောင့်ကြည့်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်) ပြောင်းလဲချက်တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မုသားဖော်စက် ဆိုတာ တီထွင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ တိကျသလဲ မပြောနိုင်ဘူး။ ၀င်ပြိုင်သူတွေတော့ အလိမ်ပေါ်မှာ စိုးလို့ အမှန်အတိုင်းကြတာတော့ မျက်မြင်ဘဲ မဟုတ်လား။ (အဲသည် ရှိုးကို ကျနော်မကြည့်ဘူးပါဘူး။)
နောက်တခုက ကိုယ်က ချစ်သူခင်သူတွေအပေါ်မှာ အမြဲမှန်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ အမှန်အတိုင်းပြောရတာပြဿနာ မရှိပေမယ့် ကိုယ်က မမှန်ခဲ့တဲ့လူဆိုရင်တော့ အကျဉ်းအကြပ်ထဲ ရောက်တော့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားစရာတခုရှိတယ်။ ဥပမာ…. ကိုယ်က မိဘအပေါ်မှာ ငြိုငြင်ခဲ့ဘူးသူဆိုပါတော့၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်မှာ သစ္စာဖောက်ခဲ့ဘူးသူ ဆိုပါစို့။ အဲသည်ပွဲကျမှ မိဘ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ဘက် စိတ်ညစ်သွားမှာစိုးလို့ ထပ်ပြီး လိမ်ပြောလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်က တထိုင်တည်းနဲ့ လူကောင်းလေး ဖြစ်သွားရောလား။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီ အလိမ်ပေါ်သွားကာမှ နှစ်ထပ်ကွမ်းလိမ်သူဘ၀ ရောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါမျိုး အဖြစ်မခံနိုင်ရင် အစကတည်းက ၀င်မပြိုင်ဘဲ နေလို့ရတယ်။ ငွေလိုလို့ မဖြစ်မနေ ၀င်ပြိုင်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ချစ်သူခင်သူတွေကို အမှန်ကို လက်ခံနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားဘို့ ကြိုတင် သဘောတူညီချက် ရယူထားပေါ့။ လူဆိုတာ များသောအားဖြင့် ချို့ယွင်းချက်ကလေးတွေ၊ အမှားလေးတွေ ရှိတတ်တာကို နားလည်အောင် ပြောပြပြီး ခွင့်လွှတ်အောင် တောင်းပန်ထားပေါ့။
အဓိက ကတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိဘို့အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာ သိဘို့အရေးကြီးတယ်။
နောက်ဆုံးတခု မထင်မှတ်ဘဲ (ပြုံးစရာအဖြစ်) သွားတွေ့တာက ဘလော့ဂါတော်တော်များများက သူတပါးစိတ်ချမ်းသာဘို့ လိမ်ပေးတန်သင့်ရင် လိမ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ခံတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ သူတို့တွေ ဘလော့တကာ လည်ပြီး ကွန်မင့်ကဏ္ဍတွေမှာ “ ဟယ်….ရေးတတ်လိုက်တာ”၊ “စာဖတ်သူကို တထိုင်တည်းအဆုံးအထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်” ဘာညာကွိကွ ရေးနေကြတာတွေဟာ ရင်ထဲက ပါလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ကြွေးကြော်တဲ့အတိုင်း တဖက်သာူး စိတ်ချမ်းသာအောင် လိမ်ပေးနေတာလား။ တော်တော်လေး ဝေခွဲရခက်မယ်နော်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်ပို့စ်တွေမှာ လာပေးကြတဲ့ ကွန်မင့်တွေကတော့ အမှန်အတိုင်းရေးတယ်လို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်….အဟတ်ဟတ်။
အတော်ကိုရန်လိုနေတာ .. အများနဲ့တယောက်ဖြစ်နေပီဆိုတာလဲ သတိထားဦးဗျ။
ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်စာရေးမကောင်းရင် .
ဘာမှ မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးပြန်သွားတတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေလဲ ရှိတယ်။၀ါးလုံးရှည်နဲ့ မယမ်းနဲ့.။
မတန်ခူးရဲ့ ဘလော့ဆိုတာလဲ သတိထားဦးဗျ
ကျနော်လေပေါသမျှ မိတ်ဆွေ အသေးစိတ် လိုက်ဖတ်နေတော့ ကျနော့်အဖို့ လက်ညောင်းရကျိုးနပ်တာပေါ့ဗျာ။ ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်ပေါ့။…း-)
အစ်မကြီးရေ့ နေကောင်းလား ဆီပုံးလေးတပ်ပါလားးး) အရေးပေါ်နှုတ်ဆက်လို့ ရတာပေါ့ ကော့မန့် တွေဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ့ :P တစ်မျိုးကြီးပဲ စိတ်ထဲမှာ ဆိုင်တာလည်းဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တာပဲ ဟိဟိ တော်သင့်ပြီး သားသားရေ့ ဒီနေ့ ဘာနဲ့ စားတုန်းဗျ
ကျွန်မ ကော်မန့် တွေ မပြန်ခင် ကျွန်မပို့ စ်မှာ ကျန်သွားတဲ့ ဒီ game show ရဲ့ အဖြေအမှန်အမှားကို ဘယ်လို ဆုံးဖြတ်လဲဆိုတဲ့ အချက်ကို အရင်ပြောပြပါရစေ… ကျွန်မ ပို့ စ်မှာ ဒီshowအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေ ဖတ်နိုင်ဖ်ို့လင့်ခ်တော့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်… ဖြေဆိုသူလိမ်မလိမ်ကို အမှန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ဖြေဆိုသူကို ဒီမေးခွန်းတွေပဲ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မေးခဲ့ပါတယ်… တကြိမ်မှာ အမှန်တွေချည်းဖြေရမှာဖြစ်ပြီး နောက်တကြိမ်က လူအများကြီးရှေ့ မှာ ကြိုက်သလိုဖြေခွင့်ရှိပါတယ်… ပထမတကြိမ်ဖြေချိန်မှာ အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိပေမယ့် လိမ်တာတိုင်းတာစက်တွေနဲ့သူ့ တကယ် အမှန်ဖြေမဖြေ တိုင်းတာ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်… ဒီအဖြေတွေကို အမှန်အနေနဲ့ ယူပြီး တကယ်လူအများကြီးနဲ့ဖြေတဲ့ ပွဲကြီးနေ့ က အဖြေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး လိမ်မလိမ် ဆုံးဖြတ်တာပါ…
အားလုံး စိတ်ဝင်တစားနဲ့အတွေးအမြင်ဖလှယ်ပြီး ကော်မန့် လေးတွေ ပေးထားကြတာ ကျေးဇူးပါ…
ချိုသင်းရေ… ချိုသင်းမေးခွန်းလေးအတွက် အပေါ်မှာ ဖြေပေးလိုက်ပြီနော်… ဘ၀မှာ ချစ်တဲ့သူတွေကို မထိခိုက်စေပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် နေခဲ့တဲ့ ချိုသင်းဘ၀က အတုယူ အားကျစရာပါ…
ဟုတ်ပါ့ မ ရေ… ကိုယ်က ကျူးလွန်သူမဟုတ်ပဲ ကျူးလွန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူဆို အမှန်တရားရဲ့ ခါးသီးမှုတွေက ကိုယ့်ဆီပါ စီးဆင်းလာမှာ…
ပေါက်ရေ… ကောင်းသောလိမ်ညာခြင်း… စေတနာမှန်တဲ့ အလုပ်က ကောင်းသောအလုပ်လို့ပြောလို့ ရမယ်လို့ထင်တာပဲ… ရွေးချယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ မလိမ်မညာပဲနဲ့ လုပ်လို့ရမယ့် နည်းကို ရွေးချယ်သင့်ပေမယ့် ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ပျောက်ဆုံးနေရင်တော့….
ကိုယ်သာ အဲလိုနေရာမှာ အမေးခံရရင်… သွားဖြေသင့်မဖြေသင့်ကို အရင်စဉ်းစားသင့်တယ် ထင်တာပဲ ကိုပီတိရေ…
ညီမရေ… အမှန်ပဲ… သတ္တိကြောင်တယ်ပြောပြော….
မြတ်နိုးရေ… တို့ အဖိုး ဆုံးခါနီးက နှစ်ပတ်လောက် ကိုမာ ရသွားတယ်…အသက်ရှင်လျှက် လောကကြီးနဲ့ အဆက်ပြတ်သွားတာလေ… အဖိုးက အသက်ကလဲ အတော်ကြီးပြီဆိုတော့ တို့ ဆို သတိပြန်လည်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်တောင် မထားမိဘူး… ဒါပေမယ့် အဖိုးသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်… သူများတွေက ပြောကြတယ်… သတိပြန်လည်ပြီး ခဏပဲ ခံတတ်တယ်တဲ့… ဒီတော့ အဖိုးနေရတုန်းခဏ စိတ်ချမ်းသာမယ့် စကားတွေပဲ ရွေးပြောခဲ့တယ်… တရားဓမ္မအကြောင်းတွေလဲ ပြော… နောက်…အင်း… ကောင်းသောလိမ်ခြင်းလို့ ပဲ ခေါ်မလား… အဖိုးကို တခုလိမ်ပြောမိခဲ့တယ်… အဖိုးသမီး တို့ အမေနဲ့ ရွယ်တူ… တို့ တွေ အားလုံးရဲ့အမေကို အဖိုးက သိပ်လေးစားချစ်ခင်တာ… အဖိုးမဆုံးခင်တရက်အလိုမှာ သူ့ ရဲ့ အဲဒီသမီးလေးမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပြီလို့လိမ်ပြောခဲ့တယ်… ပြုံးသွားတဲ့ အဖိုးမျက်နှာလေးကို ကြည့်ရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ… အဲဒါအဖိုးရဲ့နောက်ဆုံးအပြုံးပါပဲ… ဒါပေမယ့်… တို့ ရဲ့ လိမ်ညာမှုတွေက ယနေ့ ထက်ထိ အမှန်တရားဖြစ်မလာသေးတာတော့….
မောင်မျိုးရေ… ရိုးသားတဲ့ အမေချစ်သားလေးရဲ့ စေတနာ… စေတနာအားကြီးသွားရင် လိမ်စရာတောင် မလို အဆင်ချောသွားတတ်တယ် မောင်မျိုးရေ…
မမရေ… အဲဒီလို ပွင့်လင်းတာလေးတွေကြောင့် ချစ်နေရတာ….
ကိုပေါရေ… ကိုပေါပြောတာတွေကို လက်ခံပါတယ်… ဗုဒ္ဓအဆုံးအမအတိုင်း ဘယ်လိမ်ညာတာကမှ မကောင်းဘူးဆိုတာကိုလဲ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပြီး ငါးပါးသီလ လုံအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပါတယ်... ခက်တာက… ကျွန်မအဆင့်က ရင့်ကျက်သူအဆင့်ကို မရောက်သေးတာပဲ… ကြိုးစားနေတုန်းပါ်… အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို တတ်နိုင်သမျှ မလိမ်ရမယ့် လမ်းကို ရွေးပါတယ်… (ကိုပေါရေ…ရွေးစရာမရှိတဲ့ဘ၀တွေ အကြောင်း တွေ့ တဲ့အခါပြောပြဦးမယ…လက်တွေ့ ဘ၀တွေပေါ့်)… ကိုပေါရေးမယ့် ဒီအကြောင်းကို စောင့်ဖတ်ပါမယ်…
ကျေးဇူးပါဆောင်းရေ… နောင်လဲ အမြဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
နုရေ… နုသိချင်တာလေး အပေါ်မှာ ဖြေပေးထားတယ်နော်… အမှန်တရားဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ ထုတ်ဖော်မှ မှန်သတဲ့လားတဲ့… သိပ်လှတဲ့စကားလေးပဲ…တို့ ရင်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ အမှန်တရားတွေအများကြီး…ဟုတ်တယ်နော်…
ကိုပေါနဲ့ Anonymousရေ…ခုလို စိတ်ဝင်တစား ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူုးပါ…ဒါကပဲ ဘလော့ဂ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ တခုမဟုတ်လား…
ဟိဟိ… နိနိရေ… ကိုယ်ဦးနှောက်ခြောက်တာတွေကို သူများဆီဝေမျှလိုက်တာ ဆိုးတယ်နော်… စ်ိတ်ချမ်းသာစရာပို့ စ်လေးတွေနဲ့ပြန်လျော်ပေးမယ်….
ညီမလေးရွှေပြည်သူရေ… ဟုတ်တယ်နော်… သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လူမှုရေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ showက ပိုလို့ အသက်ဝင်တယ်… လာလည်တာ ကျေးဇူးပါညီမရေ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ကောင်းကင်ကိုရေ… အဲဒီgameသွားရင် ဖောက်ထွင်းမျက်မှန်မလိုတော့ဘူး…
Everestရေ… ဟုတ်တယ်နော်… ငွေကြောင့်လား…ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့ လား…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တချို့ သူတို့ အဖြေတွေက သူတို့ ကို လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးနဲ့ တောင် ပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်… ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲ လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ပန်ရေ… မနောက်နဲ့ နော်… ပန့် မေးခွန်းတွေ ဖြေဖို့ ဥာဏ်မမှီဘူး…အဖြေပြောပြ…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ပြောသွားတာလေးက ကောင်းလိုက်တာ… ဟုတ်ပါရဲ့… ကျွန်မတို့ တွေက လူအဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတာပါ…
ကိုပေါရေ… ကော်မန့် တွေက သူတပါးစိတ်ချမ်းသာဖို့ လိ်မ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ခံတာ လို့ ကျွန်မက မယူဆပါဘူး… သူတို့ ဆိုလိုရင်းက စေတနာပါ… စေတနာတရားက လွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါ သူများကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်သွားတာပါ… ကိုယ့်မိဘကို၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့ စေတနာအရင်းခံက လာတဲ့ စကားတွေပါ…ကော်မန့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်မလိုပဲ အများစု အဲဒီလို ဖြစ်ကြမယ်ထင်လို့ကျွန်မနဲ့ ပဲ ဥပမာ ပြပါရစေ… ကျွန်မ ဘလော့ဂ်လည်တဲ့အခါ ဘလော့ဂါရဲ့ စာကို အသေအချာဖတ်ပါတယ်… အပြင်ပန်း ဖတ်ပြီး ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ကော်မန့် ပေးတဲ့အထဲ ကျွန်မ မပါပါဘူး…ကျွန်မစိတ်ထဲက ရှိတဲ့အတိုင်း ကော်မန့် ပေးပါတယ်… တကယ်လို့ ကျွန်မသ်ိပ်မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ကော်မန့် မပေးပါဘူး… မကြိုက်ကြောင်းကို ဘာလို့ မပြောလဲဆိုတာ ကျွန်မကို မုန်းသွားမှာ ကြောက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး… သူ့ ရဲ့ အားထုတ်မှုကိုငဲ့ညှာလို့ ပါ… ပို့ စ်တခုရေးဖို့ အားထုတ်ရတဲ့ စိတ်အားလူအားကို ကျွန်မထည့်တွက်လို့ ပါ… ကျွန်မဆီလာလည်ကြတဲ့ ဘလော့ဂ်ရောင်းရင်းတွေလဲ ကျွန်မလိုပဲလို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်…
မောင်မျိုးရေ… ဆီဗုံးလေးတော့ တပ်ချင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် အချိန်မှီမပြန်နိုင်မှာ အားနာလို့ … ခုတောင် ကော်မန့် တွေကို အချိန်မှီမပြန်နိုင်မှာ အားနာနေတာပါ… သားလေးကလဲ လေးလေးမျိုးကို သတိရနေပါတယ်… ဒီအပတ်အတွင်းသားလေးဆွဲတဲ့ပန်းချီလေးတွေ တင်ဖြစ်လိမ့်မယ်…
တန်ခူးရေးထားတဲ့ အမှန်တရား ရဲ့အရသာ ရယ်...
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့အမှန်တရားအတွက် ရှုထောင့် အစုံစုံက Comments တွေရယ်...
တန်ခူးရဲ့ပြန်ထားတဲ့ Comments ရယ်ကို အချိန်ပေးပြီး သေသေချာချာ ဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း...
မကြာခင်ကမှ ရေးထားခဲ့ပြီး ကျနော်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ တန်ခူးရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းလေးနဲ့ လာလည်ကြသူတွေရဲ့ ကွန်မင့်လေးတွေကို အမှတ်တရ ပြန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။း-)
September 2, 2008 12:57 PM
September 2, 2008 7:55 PM
September 3, 2008 9:56 AM
September 3, 2008 2:02 PM
September 4, 2008 10:47 PM
ကိုပေါရဲပ bolg က ဘာလဲ။ အားပေးချင်လို့ဘာ
သက်ဝေရေ…မအားတဲ့ကြားထဲက အချိန်ပေးပြီး ဖတ်သွားတာ တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကိုပေါရေ… အပြုသဘောနဲ့ အပျက်သဘောရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်…
အပြုသဘောဆောင်တာက သူများ အကျိုးလိုလားပြီး
အပျက်သဘောကတော့ သူများ အကျိုးမလိုလားတာပါ
ကျွန်မရဲ့ အချိုမကြိုက်တဲ့ငါ ပို့ စ်ကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး…
ကျွန်မက အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အချိုတွေကို မုန်းတယ်… ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အချိုကို ဘယ်တော့မှ မလူးဘူး…
စိတ်ထဲမှာ ဆဲနေပြီး အပြင်မှာပြုံးပြနေတဲ့ သူတယောက်ရဲ့ အပြုံးက အပြုသဘောလား အပျက်သဘောလား သိပ်သိသာထင်ရှားပါတယ်…
ကိုပေါပြောတဲ့ ဥပမာပဲ ပြန်ပေးရရင် ငယ်က ကလေးတွေ ဆေးသောက်စေချင်လို့ဆေးချိုတယ်ပြောတာဟာ အပြုသဘောအရ ပြောဆိုခြင်း… အဲဒီနောက်မှာ စေတနာဆိုတဲ့ အကျိုးလိုလားခြင်းတွေ ပါနေတယ်လေ…
အမှန်တရားရဲ့ အရသာ ပို့ စ်နောက်ခံ gameမှာ ကစားသူ နဲ့ ကစားသူအသိုင်းအ၀ိုင်းက အရင်းနှီးဆုံးသူတွေ ပဲပါပါတယ်… မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကလဲ သူ နဲ့ သူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားက ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ပါပဲ… သူ့ အရင်းနှီးဆုံးအသိုင်းအ၀ိုင်းက သူ့ အကျိုးလိုလားသူတွေ အပြုသဘောဆောင်သူတွေ များမှာပါ… ဒါကြောင့် အပြုသဘောနဲ့ တွေးရင် တဖက်သား(အဲဒီတဖက်သားက…ကိုယ့်နဲ့ သိပ်ကိုရင်းနှီးလွန်းတဲ့သူ…ကိုယ့် မိခင်တောင်ပါရင်ပါနိုင်တယ်) နှလုံးသားကို မနာကျင်စေချင်တဲ့ စေတနာကို ကျွန်မဆိုလိုချင်တာပါ…
Anonymousရေ… ကိုပေါရဲ့ blogက http://www.kopaw07.blogspot.com/ ပါ…
ကိုငပေါရေ… ရန်ဖြစ်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး.. အမြင်တွေ ဖလှယ်နေကြတာပါ… ဘလော့ဂ်ရဲ့အားသာချက်က ဒါပဲထင်ပါတယ်… ခုလို လာလည်တာကျေးဇူးပါ…
အခုလို တန်ခူးရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ရှင်းပြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမှားအမှန်၊ မုသားပြောခြင်း မပြောခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ နောက်ကျနော်အချိန်ရမှ ပို့စ်တခုသတ်သတ် ရေးဘို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့အတွက် အမှားအမှန်နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ကွန်မင့်ကို ဒီမှာ ခဏနားလိုက်ဦးမယ်။
တကယ်တော့….. မနေ့က တန်ခူးလို ပို့စ်မျိုးဆန်ဆန်ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တခုကို White Lies တွေအကြောင်း ကျနော်အင်တာနက်မှာ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ တွေ့မိတယ်။
အဲသည်မှာ သတိထားမိတာက ကွန်မင့်လုပ်တဲ့လူတွေဟာ ကိုယ့်အယူအဆကိုယ် ကိုယ်ထင်သလို ကွန်မင့်လုပ်ကြတာဘဲ။ အမြင်မတူလို့လဲ ကန့်လန့်တိုက်တယ်၊ စွာတယ်၊ ရန်ဖြစ်တယ် ရယ်လို့လည်း ဘယ်သူမှ ပြောမနေကြဘူး။
ကျနော်ထင်တာတော့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျနော်တို့ မြန်မာဘလော့ဂါအသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေ နည်းနည်း စိတ်နုသေးတယ်လို့ ထင်တာဘဲ။ နည်းနည်းလေး အများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်ကို တင်ပြမိတာနဲ့ အများနဲ့ တယောက်ဖြစ်နေပြီ။ စွာတယ်။ ရန်စတယ်၊ ရန်ဖြစ်နေကြတယ်၊ မညီညွတ်ဘူး စသဖြင့် ဒီလိုမြင်ကြတယ်။
တချို့ကလည်း Conflict ဆိုတာနဲ့ ဝေးဝေးရှောင်ကြတော့တာဘဲ။ နောက်တခုကတော့ အမည်ဝှက်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ။ ဒါတွေကလည်း နအဖလက်ကိုင်ဒုတ် သတင်းစာတွေပေါ်မှာ အမည်ဝှက်နဲ့ ရေးနေတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေကျနေတာဘဲ။ တဖက်သက် နာမည်ဝှက်နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ရေးသားနေကြတာမျိုးတွေ တွေ့ရတယ်။
အမှန်က ဆန့်ကျင်ဘက် အမြင်တွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံရမယ်။ အဲသည်အမြင်တွေကြားမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အပြန်အလှန် ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးတာဟာ အင်မတန် သင့်လျော်မှန်ကန်တယ် (Very healthy) ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဘို့ လိုပါတယ်။ အဲသည်လို ဆွေးနွေးမှသာလျှင် ကိုယ့်ရဲ့ ဗဟုသုတနဲ့ စဉ်းစားဉာဏ်ကလည်း တိုးတက်ဖွံ့ထွားမှာကိုး။
အားလုံးတသံတည်းထွက်နေတာမျိုးက လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ တသွေးတသံတမိန့် ဆိုတာ ဘယ်လိုလူအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာဘဲ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ်မှာဘဲ အဲသည်လို တသွေးတသံတမိန့်ကို တွေ့ရတာမဟုတ်လား။
အများနဲ့ တယောက် အမြင်မတူလို့ မပြောရဲတာမျိုးလည်း မရှိသင့်ပါဘူး။ တချိန်တုန်းက ကမ္ဘာကြီးပြားတယ်လို့ လူတိုင်းထင်ခဲ့တဲ့ခေတ် ရှိခဲ့ဘူးတာဘဲ။ အမှန်တရားဆိုတာ လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့လူ အနည်းအများပေါ်မှာ မူမတည်ပါဘူး။ လူနည်းစုက အမှန်တရားကို မြင်နေတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုက လွတ်လပ်တဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာဆိုရင်တော့ လူနည်းစုရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ ရပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးရတယ်။ လူနည်းစုဘဲ ယုံကြည်တဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးကို မှားတယ်ဆိုပြီး အများစုက ပိတ်ပင်လို့ မရဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ပိုင်ခွင့်၊ တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်တွေ ရှိရတယ်။
တန်ခူးရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောထားတွေကို မပိတ်ပင်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်လာဖတ်သူတွေအနေနဲ့လည်း အကြောင်းအရာတခုကို မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေက ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကြတာဟာ ညီညွတ်ခြင်းပျက်ပြားတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်။ ရန်ဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်သင့်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အဲသည်လို ဆွေးနွေးကြပြီဆိုရင် ချက်ကျလက်ကျ ပြောနိုင်ဘို့အတွက် စဉ်းစားရတယ်။ ဖတ်ရှုရတယ်။ လေ့လာရတယ်။ တကယ်လို့ အဲသည်ဆွေးနွေးပွဲမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့၊ စဉ်းစားမြော်မြင်တတ်တဲ့၊ ဗဟုသုတကြွယ်ဝတဲ့ ဆွေးနွေးသူတွေ ပါဝင်လာပြီဆိုရင် အင်မတန်လေ့လာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းရတယ်။
သည်လို ကောင်းမွန်တဲ့ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုတွေကို အခုလိုဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်လက် ဖွင့်ပေးထားပါလို့ တန်ခူးကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မတန်ခူးပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပို့စ်၂ခုလုံးကို ထောက်ခံတယ်။ ကိုပေါကို ပြန်ဖြေရှင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။
အမှန်က ပြောသူ ကိုလေပေါ ကိုယ်တိုင်က ရန်စနေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
သူမကျေနပ်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် မတန်ခူးရေးခဲ့တဲ့ အချိုမကြိုက်တဲ့ငါကို ကူးပြတာပေါ့။
တကယ်က ရန်လိုနေသူသည် ကိုပေါသာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း နဲ့
နောက်ဆုံးမှာ ပျားရည်နဲ့ ပြောသွားသည်ဟု မြင်မိပါကြောင်း
ဟုတ်မှန်၊အကျိုးမရှိ။သူများမနာ လိုသောစကားကို ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် ပယ်ထားတာပဲ။